Uyisebenzisa kanjani kwakhona ikhompyuter endala usebenzisa iLinux-Ikkaro
yokuqalisa >> Ukulungiswa >> Ukufumana kwakhona ikhompyuter yakudala yeLinux
I-ACER Veriton L460
Bandishiya ndihlaziye ikhompyuter endala, iAcer Veriton L460. Oko kwaqala kweza Windows Vista Business OEM, kwaye ngoku ibifakelwe iWindows 7. Bakhalaza ukuba ihamba kakhulu, kancinci kwaye kuba izakusetyenziselwa imisebenzi esisiseko, bafuna ukuzama ukuyifumana kwakhona.
IWindows 7 ayisasekelwa kwaye le khomputha ayisakwazi ukuhamba Windows 10. Iphelelwe lixesha. Ubuncinci bokusebenzisa ingxelo exhaswayo yeWindows
Ikhompyuter isetyenziselwa ukukhangela kuphela kunye nokunikezelwa kwesikolo, Sebenzisa umhleli wokubhaliweyo iLizwi, iLibreOffice. Funda i-pdf uze uprinte into.
Ukuba ubona iimpawu zePC, ine-1Gb ye-RAM kuphela, namhlanje ephantse yaphelelwa lixesha.
Windows okanye iLinux
Ngokumangalisayo Bandicelile ukuba ndibeke iLinux ndingakhange ndiyikhankanye. Ke ndiyalibala ukujonga uhlobo lweLite okanye ukubeka iWindows XP engasasebenziyo kwaye kufuneka ndifakele isoftware. Ndicinga ukuba kuhle ukubeka iLinux kuyo. Izibonelelo zininzi kule meko.
Ulwabiwo olungenasiphelo seLinux kwilifa kunye neKhompyuter eziNcedo
Oku kufuna inqaku ngokwalo, kodwa nazi ezinye iindlela:
Izibonelelo zokufaka iLinux
Zininzi ezinye kwaye ndiza kuzixoxa ngakumbi kwi ulwabiwo lokukhanya into.
Uvavanyo lweXubuntu Linux
Ngeli xesha ndiyathandabuza phakathi kokufaka iXubuntu okanye iManjaro XFCE, ezizinto ezibini ezihambisa ezifuna i-512 MB ye-RAM. Ke kufuneka isebenze kakuhle.
Ndigqibele ngokufaka iXubuntu kwinguqu yayo ezinzileyo 18.04. Ukukhululwa kweManjaro kuye kwandoyikisa, kuba umbono wale pc kukuba uzinze kakhulu ukuze bangadinwa kukusebenzisa iLinux. Musa ukubanika nayiphi na ingxaki.
Ke sihamba nofakelo. Amanyathelo alula kakhulu.
Njengoko i-PC sele ifikile kunye ne-backups zayo ezenziwe, ke bekungafuneki ukuba igcine nayiphi na idatha kwaye inokucima wonke umxholo.
Yenza i-USB ngeXubuntu
Ukufakela ndiyile I-USB ekhuphayo kunye neXubuntu iso usebenzisa i-Etcher. Zininzi iindlela zokwenza i-usb esebenzayo kodwa ndiyasithanda isicelo seplatform.
Khuphela umfanekiso we-ISO weXubuntu kwiwebhusayithi yakho
Sikhuphela i-Etcher, siyivula iziphu siyenze, siyivula ngokunqakraza kabini.
Ifestile ivula ngamanyathelo ama-3. Khetha i-ISO, i-USB kunye neflash
Okokuqala sikhetha umfanekiso we-ISO esiwukhupheleyo kwiXubuntu, emva koko sikhethe ukuba yeyiphi na into esifuna ukuyenza. Kule nto kufuneka ubeke i-USB, kwaye uqaphele kule nyathelo ungakhethi i-hard drive eyahlukileyo kwaye ucime yonke into. Kungenxa yokuba ifometha idrive oyikhethayo yokufaka iLinux.
Ekugqibeleni ubetha iFlash! kwaye ukulungele.
Nje ukuba i-USB ikulungele siya kuyifaka. Ngenxa yoko siyifaka kwi-PC, kwaye siyayiqala. Ukuba iibhutsi ezinkulu ze-USB zinyuka, kuya kufuneka uqhubeke.
Ukuba ayisebenzi kwi-USB kodwa ijika ngesiqhelo, kule meko kulayishwa iWindows 7 emva koko Kuya kufuneka ungene kwi-BIOS kwaye utshintshe ukhetho lokulayisha iidiski zangaphandle kuqala.
I-BIOS ihlala ifumaneka ngokucinezela iF2 nje ukuba uvule. Sigcina ucinezela iF2 ide ingene. Kwezinye iikhompyuter okanye iilaptops endaweni yeF2 ngu-Esc okanye esinye isitshixo, ukuba azisebenzi kuya kufuneka ukhangele kuGoogle okanye kwincwadana yebhodi yakho yomama yeyiphi isitshixo esisetyenziselwa ukungena kwi-BIOS.
Kubukeka ngoluhlobo. Isebenza njengomtsalane.
Inyaniso kukuba intle. Iimenyu zilula kancinci, kodwa ke ukuba sifuna ukuba kukhanye asinakho ukubuza okuninzi kwinqanaba lomzobo.
Ndiyathemba ukuba uyayonwabela, ukuba uyakhuthazwa ukuba uzame iLinux kwaye ukuba unemibuzo ushiye uluvo
Izihloko ezibini ekufuneka ndijongane nazo ngokunzulu kwelinye inqaku
Yenza inqaku malunga neyona distros zibalaseleyo kwiikhompyuter ezindala, ezinesixhobo esisezantsi okanye kwiilaptops
Chaza ukuba uyenza njani i-USB ebusayo ukufaka ukusasazwa kweLinux okanye yeWindows.
izigaba Linux, Ukulungiswa Ukuhamba kwetikiti
2 izimvo ku "Ukufumana kwakhona ikhompyuter endala ngeLinux"
Agasti 29, 2020 kwi-11: 22 pm
ngokwaneleyo linux distron
UTshazimpuzi 26, 2022 ngexesha 3:42 am
1 I-ACER Veriton L460
1.1 Windows okanye iLinux
2 Ulwabiwo olungenasiphelo seLinux kwilifa kunye neKhompyuter eziNcedo
3 Uvavanyo lweXubuntu Linux
3.1 Yenza i-USB ngeXubuntu
3.2 Faka iXubuntu
3.3 Ijongeka kanjani